‘यही कारण कारवाही हुन्छ भने धेरैलाई कारवाही गर्नुपर्छ’
शनिबार, २१ फागुन, २०७३
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले फागुन १२ गते मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवसँग संयुक्त बिज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको बिपक्षमा उभिए । तर भट्टराईको यस्तो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उनकै पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बिरोध जनाए । निर्मल भट्टराई, हरिराम रिमाल लगायत पाँच जना नेताहरुले बिज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचना गरे । उनीहरुले आफ्नो पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एकलौटी निर्णय गर्दै पार्टीमा निरंकुशता लाद्न खोजेको टिप्प्णी गर्दैआएका छन् । असन्तुष्ट समुहका एक प्रभावशाली नेता हरिराम रिमालसँग नेपालीपत्रले यही विषयमा अन्तरर्वार्ता गरेको छ :
तपाईंहरुले पार्टीभित्रै छलफल गर्नुपर्ने कुरा बाहिर ल्याएर विवाद छताछुल्ल पार्नुपयो नी हगी ?
हाम्रो पहिलो प्रयत्न पार्टीभित्रै राम्रो छलफलको वातावरण बनोस् भन्ने थियो त्यस्तो प्रयास सफल भएन । उही कर्मकाण्डीय प्रक्रिया मात्र पूरा गरे जस्तो हामीले असहमति पत्र तयार गर्ने र पार्टी संयोजक ज्युको नजिकको नेता मार्फत उहाँलाई पठाउने । उहाँ अत्यन्तै ब्यस्त हुनुहुन्छ उहाँले त्यो हेर्न पढ्न भ्याउने कुरै भएन ।
अहिलेसम्मको अभ्यासले यहि देखाउँछ । पार्टी जीवनको यति महत्वपूर्ण मुद्दा सामान्य कर्मकाण्डीय वा प्रक्रिया मात्र पुर्याउने नहोस् भनेर जानी–बुझेरै गरेको हो । अर्को सैद्धान्तिक कुरा एजेन्डाहरु दुई प्रकारका हुन्छन् । पार्टीभित्रको मात्र एजेन्डा र जनताको एजेन्डा हामीले उठाएको एजेन्डा आम जनताको एजेन्डा हो । आम जनताको एजेन्डालाई पार्टीभित्र मात्र लुकाएर त्यसको हत्या नहोस् भन्ने हो । फेरि नयाँ शक्ति पार्टी पन्चायत बिरुद्ध लड्न वा सामन्ती राज्यसत्ता बिरुद्ध लड्न बनाइएको पार्टी संरचना होइन । यो खुल्ला समाजको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न बनाइएको संगठन हो यो पार्टीभित्र रणनीतिक कुराहरु बाहेक अरु गोप्य हुँदैनन् । यदी गोप्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयो भने बुझ्नुहोस् त्यहाँभित्र पनि जनतालाई ढाँट्ने र मूर्ख बनाउने काम भैराखेको छ । नभए ‘मासबेश’मा आधारित पार्टी संरचनाले मासलाई लुकाउनुपर्ने गोप्य कुरा के नै हुन्छ र ?
चर्चामा आउन योजनाबद्ध ढंगले कसैबाट परिचालित भएर सार्वजनिक गर्नुभएको भन्ने छ नी ?
(हा हा हा) योजनाबद्ध रुपमा वा नियोजित रुपमा कसैबाट परिचालित भएर यो ल्याइएको होइन । त्यसो हो भने ११ गते पनि पार्टीको एउटा बक्तब्य आएको छ । त्यो भन्दा अघि धेरै पटक पार्टीको कुनै निकायमा छलफल नै नगरी दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु सार्वजनिक भएका उदाहरणहरु छन् । चर्चामा आउन त यत्तिका समय किन चुपचाप बस्थ्यौं र ? चर्चामा आउने चाहना त मान्छेलाई चाँडै मन लाग्छ नि होइन र ? बरु अहिले चाहीँ विभिन्न पार्टी बिरोधी तत्वहरुले सहानुभुती देखाइरहनुभएको छ । यो के हुने रैछ भने सुरुवात योजनाबद्ध वा कसैबाट परिचालित नभए पनि घटनापछि पार्टीभित्र आक्रोशको सिकार भइने र पार्टी बाहिरकाले चाहीँ सहानुभुती देखाउने रैछन् अनि मान्छेको ‘नेचर’ चाहीँ सहानुभुती खोज्दै हिँड्ने र परिणाम चाहीँ उही योजनाबद्ध र कसैबाट परिचालित भएको जस्तो निस्कने । हामी त्यति अबुझ र कमजोर मानसिकताका छैनौँ, जसले सहानुभुती खोजोस् वा पार्टी भित्रको आक्रमणबाट बिचलित् होस् ।
तपाईंहरुलाई पार्टी नेतृत्वबाट अनुकुलता अनुसार कारवाही गर्ने तयारी छ । तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भने हामी त्यत्ती कमजोर मानसिकताका छैनौँ । एकजना पूर्व माओवादी साथीले तपाईंहरुले हाम्रा नेताहरु चिन्नुभएको छैन । बिरोध र आलोचना गर्नेलाई उहाँहरु सहनै सक्न्नुहुन्न ढिलो–चाँडो सिध्याउनु हुन्छ भनेर सचेत गराउनुभएको थियो । आइपर्ने सबै ब्यहोर्ने भनेरै अघि बढेका हौँ । हेर्नुहोस् यो समाजको विशेषता भनेकै जुन नेता आफ्ना आलोचकहरुको वरिपरी हुन्छ उ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ । प्रचण्ड–बाबुरामलाई दुई तिहाइको भ्रमबाट मुक्त गरेर पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न लगाउने हस्तक्षेपकारी एउटा मात्र नेता माओवादीमा हुन्थ्यो भने कम्तिमा २० बर्ष देशमा माओवादी आन्दोलन यति चाँडै डगमगाउने थिएन । तर उहाँहरुको वरिपरी सुरमा–सुरु तालमा ताल मिलाउने मात्र थिए । माओवादी बिरुद्धको ग््रयाण्ड डिजाइनलाई न प्रचण्ड–बाबुरामले बुझ्नुभयो न उहाँहरुलाई सचेत गराउन सक्ने नेताले । हामीले यो पार्टी बचाउन गरेका हौँ हामी यो पार्टीमा अटाउँला न अटाउँला त्यो अलग कुरा भयो । अहिले नकारात्मक देखिए पनि यसको दुरगामी परिणाम राम्रो देखिनेछ ।
अर्को कुरा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको कुरा मैले चाहीँ डा. बाबुराम भट्टराईबाटै सिकेको हुँ । जनयुद्ध गरिरहेको माओवादी पार्टीको संरचना सैन्यवादी थियो त्यस्तो संगठनमा पनि उहाँले भौतिक कारवाही समेत सहन तयार भएर आन्तरिक जनवादको कुरा पटक–पटक उठाउनु भएको थियो । पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको कुरा उठाउनुभएको थियो । हाम्रो त पार्टी विधान नै हामी डाइरेक्ट डेमोक्रेसी सहितको उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेछौँ हाम्रो पार्टीको आन्तरिक संरचना पनि त्यही अनुरुप हुनेछ । पार्टीमा सदस्यहरु समान र सार्वभौम हुनेछन् भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । हामिले त पार्टी विधानलाई सक्रिय गराउन मात्र खोजेका हौँ । वा पार्टीमा विधान भन्दा माथि कोही भएको जस्तो प्राक्टिस भयो भने यसले लामो समय नकारात्मक नजिर स्थापित गर्छ । त्यसमा सचेत गराउन मात्र खोजेका हौँ । जहाँसम्म कारवाहीको कुरा छ यही कारण कारवाही हुन्छ भने धेरैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
हामी त्यसको प्रमाणसहित फेरि तपाईँहरुसँग आउछौँ । तर मिडियाहरुमा पनि डा. भट्टराई निरंकुश स्वाभावको र आलोचना सहन नसक्ने स्वभावको हुनुहुन्छ भन्ने नकारात्मक धारण बनेको रहेछ । उहाँमा त्यो स्वभाव छैन यो कुराको प्रमाणित उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
तपाईँहरुको खास असहमती चाहिँ के हो त ?
आज हामीले जे अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौँ भोली त्यसको ऐतिहासिक महत्व स्थापित हुन्छ । त्यसैले हामी पार्टी पोलिसीमा चुक्नु हुँदैन । त्यो बक्तब्यका अधिकांश बुँंदाहरु पार्टीका सैद्धान्तिक मुल्य र मान्यताभन्दा बाहिर छ्न । मैले केही पार्टीकै राजनीतिक समितिका नेताहरुलाई फोन गरेर यस्तो बक्तब्य किन पास गर्नुभएको भनेर सोधेको थिएँ । उहाँहरुले त ए फेरि अर्को बक्तब्य आएको छ र ! मलाई पनि पठाइदिनु न पो भन्नुभयो ।
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा असाध्य लिवरल साथीहरु पु¥याइनुभएको छ । धेरैजसो त राजनीतिक एजेन्डाहरु बुझ्ने त्यसमा छलफल गर्ने आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट राख्न सक्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्न । कहिलेकाहीँ केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट अनुमोदन भएर आएका एजेन्डाहरुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । यस्तो सरल बाटो पनि उहाँ संयोजक किन हिँडिरहनुभएको छैन भन्ने हो ।
तपाईँहरुको नेता डा. भट्टराईले त हिमाल, पहाड, तराइ मिलाउनुपर्ने भन्दै सन्तुलन किसिमले नै उपेन्द्र यादवहरुसँग मिल्नुभएको होला । त्यो ठिकै हैन र ?
कुरा ठिकै हो तर हिमाल, पहाड र तराई मिलाउन हाम्रो पार्टी पनि त हिमाल, पहाड र तराइ तीनै तहमा सन्तुलित हुनुपर्यो । एउटालाई छोडेर अर्कोलाई समात्दैमा त त्यो कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ र ?
ठ्याक्कै भन्नुस् त कुन्–कुन् बुँदाहरु पार्टीका मूल्य–मान्यताहरुसँग बाझिन्छन् ?
हाम्रो पार्टीको आधारभुत अवधारणा नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा कोर्स पूरा भएको र आर्थिक विकास पछाडी छोडिएकाले त्यो आर्थिक विकासलाई अगाडी बढाउन गठन भएको दल हो । यसको सांगठनिक संरचना पनि आर्थिक विकासमै केन्द्रित हुने अनुसारको हुनुपर्छ । यो संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन भने हामी पुनः राजनीतिक क्रान्तिको बिकराल गोलचक्करमा फस्नेछौँ । फेरि यो संविधान हाम्रो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा निर्माण भएकाले यो संविधान जति स्थापित हुन्छ त्यति नै हामिलाई पनि स्थापित हुन मद्धत गर्छ । एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला दलमा यो संविधानले स्थापित गरेका मुल मुद्दाहरुबाट पछाडी फर्किने कुरा चलिरहेको छ । अनि हाम्रा गतिबिधिहरुले उनिहरुलाई सघाउ पुर्याउने त ? पहिलो बुँदामा हाम्रो पार्टीको अवधारण अस्ति सम्म सरकारले नै पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा समर्थन थियो अहिले परिमार्जन सहितको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा गरिएको छ । तर कस्तो परिमार्जन खुलाएको छैन । २, ३ र ४ नम्बर बुँदामा प्रदेशलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने गरी निर्वाचन गर्ने कुरा बढी घातक छ । हाम्रो पार्टीले केन्द्रको मातहत प्रदेश र प्रदेशको मातहत स्थानीय तह हुने संघीयताको कल्पना गर्दैन ।
यो त अहिले पनि छ एउटा प्रदेश मात्र थपेर संघियता हुने होइन । बरु हाम्रो पार्टीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह एकार्काको अन्तरसम्बन्धित भएर शक्ति पृथकिकरण र गतिशील सन्तुलनमा आधारित संघियताको कल्पना गर्छ । बाँकी ५ र ६ बुँदाहरु ठिक छन् ।
तपाईंहरुको पार्टी प्रवक्ता खिमलाल देबकोटाले एक अन्तरवार्तामा तपाईंहरु पार्टी बिगार्न नियोजित रुपमा लागेको र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढेको कुरा बताउनुभयो । रामेश्वर खनाल लगायतका नेता रवीन्द्र मिश्रको पार्टीमा सामेल हुने सुचना आएको छ । तपाईंहरुको तयारी के छ ?
पहिलो कुरा चाँही हाम्रा नेताहरुलाई लागेजस्तो यो बिज्ञप्ती योजनाबद्ध र नियतबश ल्याइएको होइन । पार्टीको फ्रेम भन्दा बाहिरको बिज्ञप्ती आएपछि अकास्मत हामीले पनि उही बाटोबाट बिज्ञप्ती निकालेका हौँ । हाम्रो पार्टीले संविधानमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरुलाई मिलाएर अघि बढ्ने भनेको छ । अनि आफ्नै पार्टीमा चाहीँ सामान्य असन्तुष्टि हरुलाई पनि निषेध गरियो भने हामीले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दा एउटा मजाक बन्न सक्छ । त्यसैले यही कारण हामीले पार्टीभित्र निषेध हुनुपर्ने र पार्टी नै छोड्नुपर्ने दिन आउला जस्तो लाग्दैन । तर हामीलाई धेरैले फोन गरेर धेरैथरी कुरा गर्नुभएको छ । हामी न फुर्किएका छौँ न आत्तिएका छौँ । अहिल्यै तत्काल हामी कुनै समुहमा सामेल हुने कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा छैन । पहिलो प्राथमिकता आफ्नै पार्टीभित्र चित्त नबुझेका कुराहरु छलफल र समाधान गर्दै जाने भन्ने नै छ ।